इजरायल रोजगार खुल्यो, योग्यता के-के चाहिन्छ ? यस्तो छ छनौट प्रक्रिया । – Yuwa Aawaj
बैसाख २२, २०७८ बुधबार 348
Prevअण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कति पुग्यो !
Nextचीनले गर्यो बाचा पुरा , नेपाललाई दियो २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर ! कहिले आउँछ ?
खरबुजा ठिक्क खाए औषधि, धेरै खाए वि’ष, थाहा पाउनुहोस ।